Enye yezindlela ezivamile zokuzalanisa yamagilebhisi ekhaya - yokuzala izindlela Chubukov. It kungenziwa ngu ukutshala amahlumela egxilile phansi noma ukuxhumelela entwasahlobo. Lapha balimi imfundamakhwela kuphakama umbuzo, indlela ukugcina cuttings lamagilebhisi ebusika.
Zokugaya izinhlobo ozithandayo noma uthande nge umvini usike Isiqu ukushuba ipensela (ngaphandle - isiqu mncane ezinye izinhlobonhlobo zomvini) futhi mayelana 60-70 cm ubude isimo ezidingekayo ukuze bathole eliphezulu yisithombo -. Ukuba khona kwalo okungenani 3-4 amasayithi eqinile-izinso .
Kungani ukuthi kuyasiza ukunciphisa izinto umoba ekwindla?
Phakathi abangenazo isipiliyoni ukutshalwa amagilebhisi, kukhona umbono wokuthi kulula ukubhekana ukukhiqizwa kabusha yayo entwasahlobo. I-agumenti main - akudingeki sesabe ukuthi ubusika wabuna Isiqu rots noma (okuyinto evame kakhulu kunjalo esivinini). Empeleni, le ndlela yokukhuluma kungaba ukuchitha isikhathi sakho: Imi entwasahlobo utshaleke kahle-evuthayo phansi shank kungenzeka zome futhi anginaso isikhathi nezimpande. Enye ingqinamba kulesi simo - ukuba "savuka" emvinini uhlala isilonda fresh, futhi lesi sitshalo kuyoba isikhathi eside "ogulayo". Ngakho, isitoreji iyashelela amagilebhisi cuttings ebusika.
Indlela ukukhetha impahla esifanele zokuzalela?
Çubuk inqanyulwa ukusuka maphakathi noma phansi fruited (imfuneko), yobudala efanayo imivini okunempilo, okuyinto amasheke ngowokuqala ukuvuthwa. Indlela elula - ukuze uzame ukuwuphula likaJese kancane, uma isifike ezingeni edingekayo yentuthuko, uzozwa Crackle okuncane. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi gcoba isixazululo cut iodine: bephendukela black umvini ovuthiwe. Asihambisani izithombo amahlumela mncane kakhulu noma awugqinsi, ngakho bobabili uthole izinga zokutshala impahla.
Indlela ukulungiselela kahle izitshalo esikhathini esizayo?
Umbuzo oyinhloko ebuzwa abanolwazi umvini-abatshali yamagilebhisi cuttings mayelana: "Indlela ukugcina okokusebenza zokutshala ? Ebusika eside emthonjeni ukuze uthole indlela yokuphunyuka enempilo"
Lapha kudingeka ucabangele amaphuzu ambalwa. Kungcono ubambe workpiece ekugcineni shank ka-September noma ekuqaleni kuka-October (kwenziwa izinguquko kuye ngokuthi sezulu). Ngalesi sikhathi, umsebenzi obalulekile wokuhlaziya izitshalo kuyehla, futhi izihlahla kuzokwenza umonakalo kancane ukuze amagilebhisi. Njengoba ubusika ekulungiseleleni amagatsha ulahlekelwe kakhulu umswakama, ngaphambi kokuba isitoreji kubalulekile kancane ukugcwalisa amasheya. Akuve elula: ukuthatha cuttings wasusa zonke amaqabunga isiqu esincane sesihlahla, wenza Imi fresh ngokwengxenye yayo aphansi, kanye shank ibekwe emanzini (mhlawumbe amanzi emvula noma iqhwa elicibilikile, kodwa ehlanzekile ngaso sonke isikhathi) cishe ngosuku. Le nqubo ivikela kwegatsha kusuka iphele ukuphuma, futhi ngenjabulo yena usinde ebusika. Ungakwazi ngaphezu kwalokho agcobhoze tincetu kusuka zombili kule upharafini efudumele - lokhu kuzovimba ukuhwamuka okusheshayo umswakama kusukela emgqonyeni.
Ezinye kusenzela engxenyeni engezansi Chubukov borozdochek eziningana ukukhanya obuphelele longitudinal 3 cm, ukunikeza ukuqhubeka izimpande entwasahlobo.
cuttings olungiselelwe Kunconywa moisten yensimbi sulphate (imizuzwana embalwa yanele), futhi uma engekho layo - in a ezinemibala wavuma isixazululo potassium permanganate, hinozola noma fundazol ke omisiwe ngokuphelele. Lokhu kwelashwa kuzosiza ukulwa isikhunta futhi izifo ezihlukahlukene.
Lokugcina cuttings lamagilebhisi ebusika
Lapho ekwindla ithebhu Chubukov kumele zithobele ezimeni eziningana ezonikeza isiphethu oqinile, ukulungele ukuthatha impande bese adubule ukukhula.
Kubalulekile kakhulu ukwakha cuttings izimo ezishisayo oyifunayo: degrees hhayi ngaphansi kuka-0 no-ayibi ngaphezu kuka-4. Lapho izinga lokushisa sehliselwe endaweni engeyinhle kungase iqhwa kanye nengozi isuke inkulu ukuthi izinso uzoqala ukuba sikhukhumale sikhule izimpande. Noma Isiqu embozwe isikhunta futhi umane ukubola.
Elinye iphuzu elibalulekile - ukuhlinzeka umswakama ezidingekayo (ukhetho best - 60%) kuya shank akuyona ubunile, angabiki njalo yamagceke.
Uma cuttings zigcinwa egumbini, ziba usongo namagundane, lapho jikisa ukudla okukhulu.
Ngingalutholaphi ukugcina chibouks?
Kunezindlela ezintathu kanjani ukulondoloza yamagilebhisi cuttings ebusika. Ekhaya, kungcono isiqandisi, nomsele, sela. Ukukhethwa kwesiza incike inani impahla. cuttings eziningana kungenzeka ubeke efrijini, kodwa lapho bazilungiselele ukudayiswa, noma yokutshala indawo enkulu ngeke aphumelele kakhulu ukwedlula ukhetho lwesibili. inqubo Isitoreji kuthinta ukunakekelwa ngokukhethekile cuttings ebusika.
Ukuze izithombo ezimbalwa efanelekayo ezivamile plastic ibhodlela ngaphandle ivolumu phansi isigamu ilitha. Okokuqala wathela amanye isihlabathi futhi ifakwe ezimbili isibambo, wesibili odlala indima ikhava: kuye kwaba kuwusizo kakhudlwana ukuba agqoke izindonga yenza imbobo encane. Kodwa isivalo sikakhokho on ibhodlela, isivalo ngezikhathi ukuvulelwa ukupholisa Chubukov.
Kungcono ukusebenzisa ikhamera for imifino nezithelo, njengoba kukhona izinga lokushisa evumayo kakhulu shank. Ngo ukungezwakali kwawo anganikeza isitoreji ebusika cuttings (Yiqiniso, inani elincane) eshalofini engezansi imbala. Ukuze izinhlangano zikwazi ukusungula izinga elidingekayo nomswakama wazibonela abantu belulekwa ukuba mpahla ephansi okuyingxenye Chubukov ofakwe amanzi nendwangu ekhama, azembathe kucwazi bese tie intambo kahle. Caveat kuphela - awukwazi ukuphendula yisithombo ngokuphelele, njengoba lokhu kuzodala ukuthi ukubola. Ngenyanga ezayo uzohlola isimo cuttings, futhi uma kudingeka, lokufeza ukwelashwa kwabo: Sula elicwiliswe isixazululo pink potassium permanganate uboya endaweni nezingozi zesikhunta. Ngaphambi kokufaka ipayipi yakhe emuva zibe imbala, kufanele kube yomile.
Ukudala izimo izithombo egumbini
Isitoreji esingaphezulu kuvamile cuttings ebusika lamagilebhisi emiphongolweni. Samuntu Okokuqala: uthele esitsheni efanelekayo obujwayelekile (ebhokisini, kubhavu omdala, ne inombolo encane cuttings - ibhakede) kancane kuyidambise ohlanzekile isihlabathi ungqimba kuya ku-10 cm bese usetha chibouks ukulungele ukuze ningathinti nomunye futhi kancane lwajula .. Izinzuzo lokhu isitoreji ukuthi engxenyeni engenhla Chubukov uhlala khulula isihlabathi, futhi ikuvumela ukuba zibukeke ukubona isimo sawo ebusika. Izithombo kufanele ibekwe ngokuhambisana ukukhula kwabo okungumuntu ophilayo,, basal ingxenye stem kufanele kube ezansi. Ngaphezu kwalokho - kudingeka sokuhlolwa njalo imbewu nokugcina ezingeni ezidingekayo umswakama owanele.
indlela Okwesibili: embhedeni isitsha isihlabathi yinqwaba yamagilebhisi cuttings (njengoba esitolo, isibonelo, izaqathe) nekhava (ungqimba therebetween kufanele ibe mayelana 4-5 cm). Ebusika, kudingeka bahlale moisturize okuqukethwe ebhokisini, futhi qiniseka nokuhlola Chubukov nokushintsha imigqa aphansi kanye engenhla lezihlalo. Uma kudingeka, pholisa engaphansi, ukuze ugweme ukhulisa izinga lokushisa, ikakhulukazi lapho kusondela entwasahlobo.
Esikhundleni isihlabathi sawdust efanelekayo, moss, okubaluleke kakhulu, ukuthi ayehlale ezimanzi. Umsizi kulesi simo kungaba polyethylene, embozwe esitsheni.
Ukusebenzisa emseleni nomgodi
Le ndlela kufanelekile ngaphezulu lapho udinga ukulondoloza eziningi izithombo, noma ayikho emiphongolweni. Ngezinye indawo ephakeme Ukuvubukula umsele mayelana imitha ukujula futhi ububanzi 5-10 cm eside ukwedlula cuttings (uma zisekujuleni thwi). Ngemva ukwelashwa, phansi kanye izindonga nosimende isihlabathi is batheleka ke -. 10 cm chibouks ashaye uklele noma ume uqonde, kuba imishayo kungenzeka, isikhala esiphakathi kwawo ligcwele isihlabathi, futhi inhlabathi phezulu kuthululwe. Ngedivayisi sokunene, umhlaba kufanele bavuke kancane phezu emseleni ukuthi uzovikela isitoreji indawo waterlogging, ikakhulukazi entwasahlobo. Ngenhloso efanayo kungenzeka ukumboza ne ucwecwe. kokuphakama Eduze ngaphezu kwalokho wenza anemifantu for amanzi ezikhukhula namapayipi.
Ngeshwa, okukugcina yamagilebhisi cuttings ebusika ikuvumela ukuqapha isimo sabo, ngaphezu kwalokho, angase emseleni wangaphumelela uzilungiselele enezikhukhula. Futhi esitolo ivuliwe ngoba namagundane.
Lapho evuna Chubukov eziningana amagilebhisi izinhlobo , iqembu ngalinye kumele ibekwe eceleni kusuka komunye.
Ihlola isimo se-izithombo ngaphambi kokutshala
Spring labetibambile ukulawula indlela walidla izithombo kanye cuttings ebusika. Chibouk isilungele ukuthuthukiswa, kumele abe fresh, ukubukeka enempilo, amagxolo itholakala ngaphansi ungqimba green, futhi amehlo kancane avele amahlamvu lwegciwane. Ungafaka i-amahlumela ngesikele sokuthena ambalwa amanzi - ukuze overwintered ngempumelelo e izinsukwana izinso bandisa.
Indlela yokutshala amagilebhisi kusuka cuttings: izindlela of ukhula lwenkohlakalo egcwele
Chibouks overwintered ngo-February ayaqala ukuba balungiselele ukufika. Inketho engcono - ukubeka esikhwameni ofakwe amanzi, kephunkephu it thathaza ukusetha cuttings kahle Roll up bafakwa endaweni emnyama. Emalangeni alitjhumi ukuhlola kwabo ku ukuvela impande umklamo. "Savuka" cuttings kudingeka uphonsa indebe ibhodlela plastic egcwele ingxube kwenhlabathi umquba, ukumboza phezulu ibhodlela ngaphandle lid wembatha efasiteleni noma kwezinye izindawo elikhanyayo. Lapho izimpande ugcwalise ibhodlela futhi kuyoba khona amahlamvu 4-5, ibhodlela kungaba zisuswe.
Ukugcina izincomo elula sendlela ukulungiselela cuttings (chibouks) zomvini ekwindla nasebusika ukuzigcina, ngeke esikhathini esizayo esiseduze ukuze uthole, umvini oqinile evuthiwe.
Lapho ukuhlwanyela izaqathe: amathiphu namasu
Ingabe uyazi, kungani musa eziqhakaza Geranium?
Ukukhangwa eyinhloko Astana - Isigodlo Ukuthula Accord
Haircut "umfana" - a choice of abesifazane zanamuhla
Kabili emaceleni Iyizeli "Nick". Iyizeli "Nick": izibuyekezo, izithombe
Hood Warm: Isikimu ukunitha
Tattoos ezindaweni obuseduze: aesthetics esenqatshelwe